Howlgal qorsheysan oo laga fuliyay Gobolka Jubbada Hoose – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamada Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxaa ay saacadihii la soo dhaafay ay howlgallo ka sameeyeen dhul Miyi ah oo ku yaalla deegaanka Diif ee Gobolka Jubbada Hoose,halkaas oo la sheegay inay ku sugnaayeen Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Ciidamada oo sida la sheegay inay ka tagay degmada dhoobleey ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa watay gaadiidka dagaalka,waxaana Saraakiisha hoggaamineysa ay sheegeen in uu ahaa mid lagu xaqiijinayay Amniga deegaanada Jubbaland.
Taliyaha Ciidanka Jubbaland ee degmada Dhoobleey Heybe Axmed Cabdullaahi iyo saraakiil kale ayaa howlgalka hoggaaminayay ,waxana Ciidamada intii ay howlgalka ku jireen aysan jirin wax dagaal ah oo dhexmaray iyaga iyo Al-Shabaab.
Taliyaha Ciidamada Jubbaland ee degmada Dhoobleey Heybe Axmed Cabdullaahi ayaa sheegay in u jeedka howlgalka uu ahaa in laga Shaqeeyo amniga inta ka harsan Bisha Ramadaan,isla markaana ay ka hortagaan dhibaatooyin uu sheegay inay dadka Shacabka ah ku hayaan Al-Shabaab.
Dhinaca kale Taliyaha Ciidamada Jubbaland ee deegaanka Diif Liibaan Mahad Salaad ayaa sheegay in ay ka go’aan tahay inay Al-Shabaab ka saaraan deegaanada ay kaga sugan Gobolka Jubbada Hoose.
Al-Shabaab ayaa mararka qaar waxaa ay weeraro ku qaadaan Saldhigyada Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM,waxaana dhaca dagaala u dhaxeeya.